स्वास्थ – Education Awareness
पर्वत अस्पतालको सेवाहरुलाई प्रभावकारी बनाउंदै २१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०८:४०
पर्वत, २१ जेठ । जिल्ला अस्पताल पर्वत जिल्लाको एक मात्र सरकारी अस्पताल हो । विगतका वर्षहरुबाट दिईदैं आएका सेवाहरुलाई प्रभावकारी बनाउंदै नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन भएपछि अस्पतालमा विभिन्न सेवा थप गरि सुधारका पनि प्रशस्त पहलकदमी भएका छन । विगतमा..
गर्मीमा कसरी गर्ने सेक्स ? तपाईका लागि टिप्स २१ बैशाख २०७६, शनिबार २१:३०
अहिले नेपालमा अत्याधिक गर्मी बढेको छ । झन् तराईमा त सहनै नसक्ने गर्मी छ । यस्तो अवस्थामा सेक्सबाट सन्तुष्ट नभएर धेरै दम्पतीहरु बिजोगमा होलान् । गर्मीमा सेक्स गर्दा पूर्णसन्तुष्टि पाउन गाह्रो हुन्छ । अहिले सेक्स मज्जा होइन सजा बन्न सक्छ ।..
दम्पतीबीच हुने उमेर अन्तरले के फरक पार्छ ? जानाै १६ बैशाख २०७६, सोमबार ०७:२३
काठमाडौं, १६ बैशाख । यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि हाम्रो सामाजिक प्रवृत्ति केलाउने प्रयास गरौं । हामीकहाँ कुनै नव दुलाहका लागि दुलही खोज्दा तुलनात्मक रुपले कम उमेरकै खोजिन्छ । अर्थात दुलाहभन्दा दुलहीको उमेर कम हुनुपर्छ । पितृसतात्मक..
आधुनिक युगमा ८० प्रतिशत मानिस खाएरै मर्छन् । ८ बैशाख २०७६, आईतवार १८:०४
कुनै समय थियो, मानिसहरू खाना नपाएरै मर्थे । अहिले जमाना फेरिएको छ । अचेल मानिसहरू ‘बढी खाएर’ नजानिँदो किसिमले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अर्थात् आधुनिकतासँगै मानिसको खानपान र रहनसहनले उसभित्र अनेक रोगको बीउ रोपिने गरेको छ । केही दशक अगाडिसम्म..
नुहाउँदा खेरि के – के सोच्ने गर्छन् केटीहरू ? ५ बैशाख २०७६, बिहीबार ०८:५१
केटीहरूको व्यवहार र सोचबारे विभिन्न कुराहरूको कल्पना गर्दछन् । तर के केटीहरू पनि एकलाई हुँदा यस्तै खालका कल्पनामा डुब्ने गर्दछन् त ? आखिर एक्लै हुँदा केटीहरू कस्ता कल्पनामा रमाउने गर्दछन् । व्यवहार अध्ययन गर्ने मनोविदहरूले महिलाहरूका..
यौनजीवनलाई सुखी बनाउने टिप्स
१. यौनसम्पर्कका बेला हरेक कुरालाई गम्भीर रूपले लिने गल्ती नगर्नुहोस्, अन्तरंग पलहरूलाई सधै ख्यालठट्टाको रूपमा लिनुहोस् । २. सम्भोगका बेला जोडीको मूडलाई ध्यानमा राख्नुहोस् । यदि जोडीको मुड खराब छ भने आफ्नो माया र स्पर्शले पहिले उसको मुडलाई सही..
यौन सम्पर्क गर्दा युवत्तीको योनी-स्तन चलाउँनु ४ बैशाख २०७६, बुधबार ०८:४६
काठमाडौं, ४ बैशाख । यौन जीवनमा सन्तुष्टि अत्यन्तै महत्वपुर्ण हुन्छ । महिलाहरुको यौन उत्तेजनामा योनी जति संवेदनशील हुन्छ स्तनको निप्पल पनि त्यस भन्दा कम हुँदैन भन्ने, यथार्थ जान्ने र भोग्नेहरुले थाहा पाएकै कुरा हुनुपर्छ । तर स्तनको स्पर्शले..
नेपालमा कृत्रिम यौनाङ्ग (सेक्स टोय) को बिक्रि बढ्दै ३ बैशाख २०७६, मंगलवार ०८:५३
कृत्रिम यौनाङ्ग सेक्स टोय हरुमा पुरुष र महिला दुवैका पर्छन् । विशेषगरि महिलाको लागि पुरुषको पेनिस र पुरुषको लागि महिलाको भेजिना आवश्यक हुन्छ । पुरुषले प्रयोग गर्ने सेक्स टोयमा २५ सयदेखि २५ हजार सम्मका छन् । त्यसैगरि महिलाले प्रयोग गर्नेलिङ्ग..
नयाँ बर्ष, नयाँ संकल्पः तपाईंको लागि विशेष हुनेछ २९ चैत्र २०७५, शुक्रबार १८:२७
काठमाडाै २९ चैत । भित्तामा झुन्डिएको नेपाली पात्रोको अन्तिम पातो पल्टदैछ । यससँगै भित्तामा पात्रो फेरिनेछ । अर्थात नयाँ बर्ष सुरु हुनेछ । नयाँ बर्ष तपाईंको लागि कति फलदायी होला ? अहिले नै यसको आंकलन गर्न सकिदैन । यद्यपी आगमी नयाँ बर्षलाई जीवनकै..
पुरुषले आफ्नो यी तिन अंग हेरोस भन्ने महिलाहरु चाहन्छन (जानी राखौ)
प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेरपनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । हुन त विज्ञानले केही चमत्कार गरेको छ । त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन ।विशेष गरेर महिलाहरूका अंग पुरुषका भन्दा आकर्षक..